Na njem nlegharị anya maka Africa, mgbanwe mgbanwe nke Saudi Arabia na-aga n'ihu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndị njem nlegharị anya nke Africa » Na njem nlegharị anya maka Africa, mgbanwe mgbanwe nke Saudi Arabia na-aga n'ihu
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • investments • Akụkọ gbasara Jamaica • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • Safety • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Mgbe a hụrụ onye minista na-ahụ maka njem nlegharị anya nke Saudi bụ HE Ahmed Al-Khateeb, na Jamaica yi okpu Bob Marley, njem mgbanwe na njem na-amalite amalite.
World Tourism chọrọ enyemaka na Saudi Arabia bụ n'ebe ahụ ọzọ na-egwu na-efu ọrụ maka United States nke njem, na-efe ọkọlọtọ Saudi dị elu ma dị mkpa.
Saudi Arabia dị n'ụzọ tmbugharị UNWTO site na Madrid gaa Riyadh ga-nnabata nke isi ulo oru ohuru nke World Tourism Organisation (UNWTO), mana o buruola ndi ozo World njem na njem nleta Council (WTTC) ụlọ ọrụ mpaghara na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ zuru ụwa ọnụ.
Kenya kpọrọ ndị nnọchi anya ga-abịa na nzukọ na-abịa abịa na African Tourism Recovery na Fraịde na East Africa Country a. Ọtụtụ n'ime ndị nnọchi anya enweghị ike ichere iji zute Mịnịsta njem njem nke Saudi Arabia Ahmed Al Khateeb, onye nwere ike bụrụ onye kachasị mkpa na-enwu gbaa na mmemme ahụ.
Onye ode akwukwo njem nleta na Kenya, Najib Balala, bukwa onye ndu uwa nile nke tinyeworo aka na otutu atumatu uwa dum, tinyere eTurboNewsna-akwado Network Njem Nleta Ụwa na Ndị njem nlegharị anya nke Africa. Mụ na onye Jamaica Minister nke Tourism, Hon. Edmund Bartlett, Balala mere a Dike njem site WTN afọ gara aga.
Minista Minista njem nleta na Jamaica Bartlett rutere Kenya, ọ ga-ekwu okwu na nzukọ a na ikike ya dị ka onye ndu echiche ụwa niile a na-akwanyere ùgwù na njigide njem na mgbake. Ọ ga-ekwu okwu mkparịta ụka ya maka nzukọ Summit nke Africa.
Mgbe Kenya nọ, Minista Jamaica ga-abanye na MOU na satịlaịtị Global Tourism Resilience & Crisis Management Center (GTRCMC) na Mahadum Kenyatta mgbe ha gachara njem na Tọzdee.
Onye isi oche Kenya bụ Kenyatta na-arụ ọrụ dị ka onye isi oche na-asọpụrụ (na-anọchite anya Africa) nke GTRCMC yana Prime Minister Jamaica Andrew Holness na Marie-Louise Coleiro Preca, onye bụbu onye isi Malta.
Isi ngosi nke nleta Bartlett na Kenya nwere ike ịbụ n'ihu okwu mkparịta ụka itinye ego na Minista nke njem maka Saudi Arabia, Ahmed Al-Khateeb, nke malitere na June mgbe ọgbakọ mkparịta ụka Jamaica-Saudi Arabia nke mbụ lekwasịrị anya na ntinye ego n'ime ụlọ iji zụlite. mmụba akụ na ụba na ịmepụta ọrụ ọhụrụ mpaghara maka mba Caribbean ya.
Mgbe Bartlett na Al Khateeb hụrụ ka otu ndị mgbanwe, o doro anya na Saudi Arabia agbanweela ma na-aga n'ihu na-agbanwe ngwa ngwa - na ọtụtụ ijeri na-akwado mgbanwe a.
Otu òtù mgbanwe
N'oge ahụ, Mịnịsta Al Khateeb duuru ndị nnọchi anya dị elu n'oge nleta ọ gara Jamaica n'oge na-adịbeghị anya, gụnyere ndị bịara ya, Abdurahman Bakir, osote onye isi ala maka Ntinye Ntinye na Development na Ministry of Investment na Saudi Arabia, na Hammad Al-Balawi, General Onye njikwa maka njikwa ego na nlekọta na Saudi Ministry of Tourism.
Balala, Bartlett, na Al Khateeb nwere ike ịbụ ndị ndu mpaghara na-emeri emeri ma nwee usoro zuru ụwa ọnụ iji weta olile anya na njem njem njem na njem nleta nke Africa.
Cuthbert Ncube, Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa, na onye ndozi nke olile anya oru ngo n'okpuru nduzi nke onye isi akwukwo Ochie UNWTO Dr. Mgbanwe njem nlegharị anya nke Africa. Iguzosi ike abụghị naanị ihe dị mkpa iji wee zụlite ụlọ ọrụ njem na njem ndị achọrọ dị ezigbo mkpa na kọntinent anyị, kamakwa nkwụsi ike na nchekwa maka ọtụtụ mba anyị. "
Minista Saudi Arabia Al Khateeb, onye bụ Onye isi oche nke ọtụtụ ijeri US dollar Saudi Development for Development, kwupụtara ọhụụ nke ịbawanye mgbasawanye nke azụmahịa azụmahịa nke Saudi Arabia na ụwa.
Emere Summit Recovery Recovery na Riyadh, Saudia Arabia, n’ọnwa Mee nke afọ a. Ọ gbadoro anya na oge ọhụụ ngalaba ndị njem na-abanye ma chọpụta ụzọ iji wughachi mpaghara njem ndị njem n'Africa nke ọrịa COVID-19 metụtara.
A na-atụ anya na ọgbakọ Kenya ga-eleba anya na ohere ịmekọrịta mmekọrịta siri ike n'etiti mba Africa na alaeze Saudi Arabia, wee belata mmetụta ọrịa a ma bulie ike.